Dadka Beja - Wikipedia
Beja waa qowmiyad degta ama nool Waqooyiga Afrika, gaar ahaan koonfurta Masar, Suudaan iyo Eratareya. Afkooda waa qayb ka mid ah laanta Kushiitiga ee afafka Afro-Aasiyatik.
Dadka Beja (Beja: Oobja, Carabi: البجا) waa qowmiyado ku nool degaanka Suudaan, iyo qaybo ka mid ah Eritrea iyo Masar. Taariikhdii dhoweyd, waxay ku noolaan jireen inta badan Bariga Biyaha. Waxay tiradoodu qiyaastii 1,237,000 qof. Dad badan oo Beja ah ayaa ku hadla luuqada hooyo, sida luuqadda hooyo, oo ka tirsan laanta Cushitic ee qoyska Afrikanka. Qaar ka mid ah kooxda Beja ayaa u wareegay isticmaalka koowaad ama si khaas ah carabi. Eritrea iyo koonfurta Sudan, xubno badan oo ka tirsan Beni Amer oo ku hadlaya Tigre.
A Hadendoa Beja man (1913).
Beja wuxuu ku hadlaa luuqada Beja, oo loo yaqaan 'Bedawiyet ama To Bedawie. Waxay ka tirsan tahay laanta Cushit ee qoyska Afroasiatic Laacibka Faransiiska Didier Morin (2001) wuxuu isku dayey inuu isku xiro farqiga u dhaxeeya Beja iyo laanta kale ee Kushitic, oo ah luuqadaha Lowland East Cushitic iyo gaar ahaan Afar iyo Saho, farqiga luuqadda ee taariikh ahaan astaan ​​u ah xaqiiqada ah saddexda luuqadood marmar juquraafi ahaan jajab ah. Inta badan Beja waxay ku hadlaan luuqada Beja, laakiin kooxo hoose ayaa isticmaala lingua franca. Beni Amers waxay ku hadlaan noocyo kala duwan oo Tigre ah, halka inta badan Halengas ay ku hadlaan isku dhafka Bedawiet iyo Carabi.
Inkasta oo uu jiro saameyn carabi ah, luqada Beja weli wali waa la hadal. Xaqiiqda ah in qiimaha ugu sarreeya ee dhaqanka bulshadani ay yihiin hal waddo ama mid kale oo ku xiran hadalkooda ay ku leeyihiin ee Beja, gabayadii Beja weli waa lagu ammaanay, iyo sheegashada sheegashada dhulalka Beja ayaa kaliya oo ansax ah marka lagu magacaabo Beja , waa arrimo bulsho oo aad u xoogan oo ku saleysan ilaalinta. Xaqiiqada dhabta ah ee carabiga ah waxaa loo tixgeliyaa luuqada casriga ah, laakiin sidoo kale waa mid aad u hooseeya miisaanka dhaqanka dhaqanka ee Beja sababtoo ah waa habka lagu xad gudbo mamnuucidda bulshada. Beja wali waa luuqadda sharafta badan ee ku hadasha inta badan hadalkeeda sababtoo ah waxay u hogaansantahay qiyamka anshaxa bulshada.
Sida laga soo xigtay falanqaynta Y-DNA by Xasan et al. (2008), qiyaastii 52% ee Beja ee Suudaan waxay qabataa hugoogga E1b1b, oo intooda badani ka mid yihiin V32 subclade. Shakhsiyaadka Beja ee soo haray waxay qabtaan Jaad (38%). Labada waalidba labaduba waxay sidoo kale ku badan yihiin dadweynaha Afrikada Afiyaaliga ku hadla. Beja waa kooxda hugoogga ee la yiraahdo R1b (~ 5%) iyo Afrikaan A3b2 ah (~ 5%).
Xaalad ahaan, Hassan (2009) ayaa arkay in qiyaastii 71% ka mid ah shaybaarkooda Beja ay qaadeen qaybo kala duwan oo ka mid ah macrohaploggroup L. Afrika oo ka mid ah noocyadaas mtDNA, ), L1 (8.3%), L0a (6.3%), L4 (2.1%) iyo L5 (2.1%) haplogroups. 29% oo ka mid ah shakhsiyaadka Beja ayaa iska leh shakhsiyaadka mareegaha Eurasian macrohaplogs M (4.2% M1) iyo N (10.4% U6a1, 8.3% preHV1, 2.1% N / J1b, 2.1% R / T1, 2.1% R / U3).
Ababda Beja oo ku nool magaalooyinka Wadi um Ghamis (1961) Dobon et al. (2015) ayaa tilmaamaya qayb ka mid ah autosomal aabayaasha ah ee asal ahaan galbeedka yurubiyaanka ah ee udhaxeeya shakhsiyaadka Beja iyo dadka kale ee Afroasiyaanka ah ee ku nool Dooxada Niil iyo Geeska Afrika, oo ay ku jiraan Carabta Suudaan. Waxaa loo yaqaan 'Coptic' oo ka mid ah, waxa ay ka mid tahay Masar Copts oo degay Sudan labaatankii sano ee la soo dhaafay. Cilmi-yaqadayaashu waxay la wadaagaan qaybta Kobtiga ee la yiraahdo Ancient Egypt, iyada oo aan lahayn saamayntii Carbeed ee ka dhexjirta Masaarida kale. Hollfelder et al. (2017) ayaa sidoo kale falanqeeyay dad badan oo ka kala yimid Suudaan iyo sidoo kale waxa ay arkeen asxaab dhow oo ka mid ah autosomal affili ah oo u dhexeeya baadhayaasha Beja, Nubians iyo Suudaan, iyo sidoo kale inta u dhaxaysa dadka Shakhsiyaadka ah iyo Afroasiyaanka ku hadla ee ku nool Geeska Afrika. Beertu waxay qaadatay hanti fara badan oo reer galbeedka ah, iyadoo cilmi-baadhayaashu ay soo jeediyeen in hannaankan hiddesidahan laga soo saaro ka soo guuritaankii hore ee ka yimid Afrika dibedda ama la xidhiidhka dadka ku hadla luqadaha Kushiti
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dadka_Beja&oldid=221094"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Oktoobar 2021, marka ee eheed 16:06.